पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रचण्डले गरेको पाँचबुँदे सहमतिको प्रमाण छः पृथ्वीसुब्बा गुरुङ - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रचण्डले गरेको पाँचबुँदे सहमतिको प्रमाण छः पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग नेकपा ९माओवादी० केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको पाँचबुँदे सहमतिको प्रमाण भएको दाबी गरेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसमा कुरा गर्दै नेता गुरुङले भने, “शान्तिप्रक्रियामा आउनुभन्दा अघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रचण्डले गरेको पाँच बुँदे सहमतिको प्रमाण छ । उहाँको राजा वीरेन्द्रसँग पनि कार्यनीतिक गठबन्धन थियो । अहिले पनि ज्ञानेन्द्रको मन जहाँ छ, प्रचण्डको मन त्यहीँ छ । जहाँ ज्ञानेन्द्रको बाटो छ, प्रचण्डको बाटो त्यहीँ छ ।”
ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको पाँच बुँदे सहमति भएको बताउँदा केपी ओलीले माफी माग्नु नपर्ने उनले बताए । गुरुङले थपे, “कठैबरा ! ओलीले प्रचण्डसँग किन माफी माग्ने रु केपी ओलीले गाँजा, भाङ, धतुरो खाएर बोल्नुभएको होइन । मानसिक सन्तुलन गुमाएर भन्नुभएको पनि होइन ।
भन्ने हो भने त शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र महन्थ ठाकुरलाई पनि भन्नुहुन्थ्यो होला नि । प्रचण्डलाई मात्र किन भन्नुुुभयो होला रु”
प्रचण्डले ओलीसँग विवाद नगर्नु नै राम्रो हुने उनको कथन छ । उनले भने, “राजनेता, ठूला नेताले यस्तो विवाद नगर्नु राम्रो हुन्थ्यो । तल्लो स्तरमा उत्रनु हुँदैनथ्यो । प्रचण्डले जहिल्यै एमाले र केपी ओलीविरुद्ध विषवमन गर्नुभएको छ । उहाँको अरु के काम छ र ?”
ओलीको सरकार गिराएर प्रचण्डले कालो धनलाई सेतो धन बनाउन खोजेको आरोप पनि उनले लगाए । गुरुङले भने, “प्रचण्ड र माधव नेपाल मिलेर केपी ओलीको सरकार गिराए । हाम्रो बजेट विस्थापन गरेर कालो धनलाई सेतो बनाए । अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने गरी कुशासनको प्रारम्भ भयो । कमिसन र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरे ।
राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बेवास्ता गरी चुच्चे नक्साको व्यवहारमा अमल गरेनन् । प्रतिगमनकारी बाटोमा गइरहेका छन् ।”प्रचण्ड र ओलीको तुलना गर्दै उनले भने, “एक जना प्रतिक्रियावादीहरुसँग मिलेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सिध्याउन लाग्नुभएको छ, अर्को नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन लाग्नुभएको छ ।
एक जना राष्ट्रिय स्वाधीनताको झन्डालाई उच्च बनाउँदै वामपन्थीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ भने अर्को दक्षिणपन्थी गठबन्धनमा लागेर वामपन्थी आन्दोलनलाई ध्वस्त बनाउन लाग्नुभएको छ । उहाँहरुबीचको आरोप प्रत्यारोप स्वाभाविक लाग्छ ।
एमालेले दसौं महाधिवेशन गरेको चितवन प्रचण्डको बपौती नभएको उनको जिकिर छ । उनले भने, “प्रचण्डले एमालेले महाधिवेशन गर्दा चितवनलाई कुरुक्षेत्र बनाउनुभयो । चितवनलाई बपौती ठान्नुभयो । हामीले उद्घाटन सत्र गरेको ठाउँ कृष्णभक्त पोखरेलको निर्वाचन क्षेत्र हो । बन्द सत्र गरेको ठाउँ सुरेन्द्र पाण्डेको निर्वाचन क्षेत्र हो । जोसँग खोटो मोहर हुन्छ, त्यो धरमरमा हुन्छ ।”
प्रचण्डले केपी ओलीलाई दलाल भन्नु कुनै नौलो कुरा नभएको पनि एमाले उपमहासचिव गुरुङले बताए । उनले भने, “केपी कम्युनिस्ट, समृद्धवादी, राष्ट्रवादी हो भनेर देशभरिका जनता गोलबन्द भएकाले उहाँ त्रसित र आतंकित बन्नुभएको छ ।
एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टलाई गाली, विरोध र आलोचना नौलो कुरा होइन । तर वाद, विवाद र प्रतिवाद हुँदैमा सहकार्यको ढोका बन्द हुँदैन । राजनीतिमा स्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैन । गलत कुराको खण्डन गर्नुपर्छ ।”
एमालेको स्थायी समितिमा राम्रा नेता अटाएनन् नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले भने, “माधवजी, झलनाथजी, बामदेवजी अटाउनुभएन होला । भीम रावललाई अध्यक्षले यथावत् पदमा प्रस्ताव गर्नुभएकै हो । हलले समर्थन पनि गरेको थियो । केन्द्रीय सदस्यमा जिताइदियो । उहाँले सपथ खानुभएन । उल्टै अध्यक्षमा लडेर हार्नुभयो । अनि उहाँलाई कसरी बनाउने ?
नेपाली कांग्रेसमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता युवा आएका छन्, एमालेमा त्यस्ता नयाँ अनुहार आएनन् नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उपमहासचिव गुरुङले भने, “दाँत फुक्लेका र नङ झरेका बूढाहरु पार्टी छाडर हिँड्नुभयो । अब एमालेमा केपी ओलीबाहेक कोही बूढा नेता छैनन् । हेडक्वार्टरमा युवा नै युवा छन् ।
बूढाहरु कोही हटे, कोही सल्लाहकार समिति र अनुशासन समितिमा छन् । शंकर पोखरेल, पृथ्वी सुब्बा, पद्मा अर्याल, टोपबहादुर रायमाझी युवा होइनन् रु गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई गगन र विश्वप्रकाश शर्माकै पुस्ताका त हुन् नि ।”
शेरबहादुर देउवाको सरकार लातको भूत बातले मान्दैन भनेर एमालेले प्रतिनिधिसभामा अवरोध गर्नुपरेको दाबी पनि उनले गरे । दैनिक न्यूज नेपाल बाट